Ihe ị ga-ahụ na China | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na China
Maria | | China, Asia njem
N'ịbụ mba nke atọ kachasị ukwuu n'ụwa, nwere oghere okike dị ịtụnanya, ọdịbendị oge ochie na obodo ndị jikọtara ọdịnala na avant-garde, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na China bụ otu n'ime mba ndị a na-eleta na Far East. Mana olee ebe ị ga-ahụ na China nke ị na-ekwesịghị ịhapụ? Wepụta akwụkwọ na mkpịsị odee, anyị ga-akọwara gị ya!
Isi obodo ahụ bụ otu n'ime obodo kachasị ukwuu n'ụwa ma bụrụkwa otu n'ime ihe na-atọ ụtọ na kọntinent. Ya akụkọ ihe mere eme laghachi azụ dịkarịa ala 1000 BC na taa ọ nwere ọnụ ọgụgụ nke ihe karịrị nde mmadụ 22. Ọ bụrụ n’ị na-eche echiche ịgagharị na China, Beijing gharịrị, otu n’ime ebe ndị dị mkpa na ụzọ gị.
Oge na ọdịnala agakọghị nke ọma n'amaghị ama na ị nwere ike ịchọta ụlọ ndị na-atọ ụtọ dịka Templelọ Nsọ nke Eluigwe ma ọ bụ obodo a machibidoro iwu, ebe nwere akụkọ ihe mere eme dịka Tiananmen Square ma ọ bụ Mao Zedong Mausoleum yana akwa skde skrac, ụlọ ahịa na ụlọ nri.
Na mpụga Beijing, enwekwara ebe na-adọrọ mmasị ị ga-ahụ na China dịka Great Wall, the Summer Palace na Kunming Lake ma ọ bụ ili nke usoro ndị eze Ming.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịnọ ma ọ dịkarịa ala otu izu na obodo ahụ, ụbọchị atọ bụ oge kacha nta iji nwee obi ụtọ na ebe nkiri kachasị.
Chengdu bụ isi obodo nke Sichuan na obodo ebe a na-eri nri ndị kachasị sie ike na China, nke mere akpọrọ aha UNESCO dị ka ebe gastronomic. Ogwu ọdịnala bụ ose na-acha uhie uhie na ọ bụ ihe a na-ahụkarị iji ose Sichuan mee ka kpakpando nke nri mpaghara: ite dị ọkụ, dabere na anụ, akwụkwọ nri na azụ.
Ọzọkwa, Chengdu bụ ebe omumu nke pandas. Enwere ọtụtụ ebe nchekwa ebe ọtụtụ pandas bi na nnwere onwe nke gbara gburugburu achara. N’oge ochie, a na-eji pandas arụ ọrụ nke mba ọzọ na ngwa agha. Panda taa bụ ihe nnọchianya nke China.
N'aka nke ọzọ, n'obodo a ị ga - ahụ Buddha kachasị ibu Buddha wuru: Buddha Leshan. N'iji mita 71 dị elu site na 28 dị elu. Ewubere ya bido n’afọ 713 ma bụrụkwa akụkụ UNESCO World Heritage Site kemgbe 1996. Ọ na-anọchite anya olile anya na ọganihu.
Otu n'ime usoro nke njem site na China ga-abụ Xian, ụlọ nke ndị agha terracotta a maara nke ọma. Na 1974, site na ndaputa onye oru ugbo choputara nke mbu nke ndi agha nke XNUMX nke toro otutu aro nke XNUMX BC na eche nche nke eze mbu nke China ya na ndi inyinya ya na ugbo ya. Ọ bụ ezie na o siri ike ikwere, enweghị ihu abụọ yiri ndị dike nke Xian.
Eziokwu bụ na na Xian ị nwere ike ịchọta ọdịnala China kachasị na mgbidi ya na ụlọ elu mgbịrịgba na Drum. Ha nwekwara agbata obi Muslim na-adọrọ mmasị.
Na ndagwurugwu nke Osimiri Yangtze, otu n'ime obodo ndị kachasị biri n'ụwa n'ụwa: Shanghai, nke burula ihe omuma obodo nke China nke oganihu na uba na uba.
Shanghai nwere ihe okike nke amara site na ngwakọta a n'etiti oge a na nke ọdịnala, ebe ọ bụ na e nwere agbata obi ebe a na-etinye ụlọ elu ndị dị elu na ndị ọzọ na-ebuga anyị na China ọdịnala.
Bund bụ mpaghara nke nwere ụlọ site na oge colonial na ụdị European nke na-akpọ gị òkù ka ị gaa ogologo ije n'okporo mmiri Huangpu mgbe Pudong bụ mpaghara ego nke Shanghai, nke e wuru n'ime iri afọ abụọ gara aga na-ele anya ọdịnihu.
Ebe ndị ọzọ nwere mmasị ịhụ na China n'oge nleta na Shanghai bụ nkeji iri na ise nke French, Jiashian Market ma ọ bụ Old City, obodo ochie nke nwere ihe karịrị afọ 600 nke akụkọ ntolite.
Hong Kong bụ otu n'ime obodo ndị kachasị adọrọ mmasị na nke oge a na ụwa jupụtara na ọdịiche. Site n'okporo ụzọ nke kpakpando, ị nwere ike ịhụ ụlọ elu nke ihe ngosi ọkụ kwa ụbọchị na 20: 00 pm na ihe dị mkpa na Hong Kong bụ ịrịgo Victoria Peak, ugwu kachasị elu n'obodo ahụ, n'abalị. Chekwa ụbọchị ole na ole ị nọrọ iji chọpụta nri Cantonese, oriri na ọ andụ andụ ma gaa na steepụ kachasị ogologo n'ụwa, ndị na-ebugharị Central-Mid-Level.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Ihe ị ga-ahụ na China